MARSADA BERBERA – LABA LAYSKU HELI MAAYO (W/Q: C/RAXMAAN CAYDIID) | Warsugan News
Home Maqaalo MARSADA BERBERA – LABA LAYSKU HELI MAAYO (W/Q: C/RAXMAAN CAYDIID)
1.	in la sameeyo waxa loo yaqaano Kala-Dirid (Decommissioning), oo macnaheedu yahay in qof walba la siiyo faraqabsi uu naftiisa iyo reerkiisa ku dabbaro oo shaqada Dekadda kaga maarmo. Haddii aynu kasoo qaadno in meesha ay joogaan shaqaale (Demobilised Veterans) ilaa 1,500 qof iyo kuwa muruqmaalka ah oo iyana lagu sheegay ilaa 3,000 nin. Waxa loogu tala gelayaa 20 ilaa 25 Malyuun oo Doolar. Kadibna albaabka waa inay ka dareeraan, oo nin waliba geeloodii raacdaa, kii rabaana badda aadaa amaba beertoodii qotaa ama riyahoodiiba raacdaa. Arintaasi waa xalka abadiga ah ee arinta shaqaalaha lagu dhamayn karo (ultimate solution for once and for all). DPW waa sidaa loo fahamsiiyaa.
2.	Ka dib waa in la furo nidaam shaqaale qoris oo hufan. Kaas oo noqonaya saddex qaybood: (a) Shaqaale heerka koowaad ah (caalami), oo imtixaan lagu qaato, fursadahani waxy u furnaanayaan dadka Somaliland kasoo jeeda iyo dunida kaleba (International). (b) Shaqaalaha heerka labaad oo iyana imtixaan lagu qaadanayo. Kuwaas oo ah dadka Somaliland oo khaas ah oo xirfadoodu sarayso(national plus). (c) Shaqaale heerka saddexaad oo loogu talo gelayo dadka Somaliland. Heerkan saddexaad waxaa tirada ugu badan loogu talo gelayaa dadka deegaanka, dabcan gobolada kalena badh baa ka imanaya.
3.	Midda saddexaad waxa weeye ta la xidhiidha qandaraasyayada. Arintan waxaan aaminsanahay in gebi ahaanba loo daayo in shirkaddu (DPW)maamulato iyadu. Laakiin dhinaca kalena shariikaddu waa inay ogaato oo dareenkeeda la haato (sensitivity) in haddii ay dhacdo in qandaraasyada markasta cid sumad gooniya lihi hesho uun, in ay shaki keeni karto, degenaanshaha mashuuraca ay khatar ku keeni karto, sabatoo ah shariikadaheenu waxay inta badan u samaysan yihiin ama u habaysan yihiin qaab beelaysan ama degaamaysan!.
Previous PostDhismaha saldhiga Imaaraadka iyo maalgashiga dekeda, oo la saadaalinayo inay maalgashi dheeraad ah ka hesho Somaliland Next PostGanaaxii Igu Dhacay iyo Go’aankii Taliyaha Ciidanka Ilaalada Waddooyinka Somaliland